Maxay yihiin xilliyada ugu muhiimsan ee laga helayo raadinta moobiilka webka?
Internetka ayaa had iyo jeer sii kordhaya oo isbedbeddelaya. Maalin kasta dadku waxay ku dhajiyaan tayada macluumaadka tayada kala duwan ee makiinadaha raadinta. Si aad u fahamto waxyaabaha ay faa'iido u yeelan karto dadka isticmaala iyo kala soocida spam, matoorada raadinta waaweyn sida Google waxay u baahan tahay si loo hagaajiyo oo loo cusbooneysiiyo algorithms si joogto ah. By sidaas, waxay siinaysaa fursad labada milkiilayaasha bogagga iyo kuwa isticmaala average si ay uga faa'iideystaan ​​xog tayada. Intaa waxaa dheer, cusbooneysiinta algorithm joogto ah u saamaxaya matoorada search si ay u ciqaabaan spammers iyo khadka madow SEO. Marka, si aad u joogtid TOP of game SEO, waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto dhammaan novelties ee warshadaha raadinta mashiinka web search iyo samaynta horumar ku habboon si aad u. In this article, waxaan ka hadli doonaa saddex qeexaya daqiiqado beddelay dabeecadda SEO iyo khubaro SEO ku badalaan hababka of optimization website. Isbeddelka isbedbeddelka ku yimaada hannaanka raadinta webka
Waa muhiim in la yiraahdo tobanka sano ee ugu dambeeyay ee wararka Google algorithm ayaa si wayn u bedelay xeerarka search engine Hagaajinta. Inkastoo qaar ka mid ah ganacsatada onlineka ah ay hoos u dhaceen darajooyinkooda ka dib markii ay cusbooneysiiyeen Google, milkiilayaasha kale ee indhaha ku haya boggaan ayaa qaatay fursadan si ay u hagaajiyaan jagooyinkooda SERP. Maanta waxaan ka hadli doonaa sadexda ugu awooda badan ee algorithm ee beddelay SEO-ga maanta. Google
Google Google Update ugu horeysay
. Waxaa loo yaqaan 'update Florida Florida'. Dayactirkaan ayaa ahaa isbedelkii ugu weynaa ee ahaa barta Google ee waqtiyadaas. Ujeedada ugu muhiimsan ee cusbooneysiinta Florida ayaa ahayd in lagu garaaco khabiirada madadaalada madow ee SEO kuwaas oo isku dayaya inay wax ka qabtaan darajooyinka. Waxaa loogu talagalay inay ka fogaato farsamooyinka SEO-kumbuyuutarka sida kumbuyuutarka. Ereyga 'keyword stuffing key' ayaa ka muuqday tan iyo maalmaha hore ee horumarinta mashiinka raadinta. Waa farsamo shadiic ah oo u suurtagelisa dadka webmasters inay ku hagaajiyaan darajooyinka raadinta. Waa geedi socod lagu galo ereyo gaar ah ama cutubyo muhiim ah oo loo galo content. Sida caadiga ah shuruudaha raadinta ma lahan wax ku ool ah mawduuca oo loogu talagalay gaar ahaan khadka raadinta, laakiin ma aha dadka isticmaala celceliska. Ereyadan waxaa lagu soo celin karaa qoraalka marar badan in ay u muuqato mid aan caadi ahayn. Sidaas darteed, si loo hagaajiyo waayo-aragnimo user ee nidaamka raadinta raadinta, Google go'aansaday in ay ciqaabtaa bogagga halkaas oo keydinta keywords loo arkay. Ka dib markii dib-u-dhiskan, meelo badan oo ka mid ah ayaa lumiyay taraafikada, aadna u dhibaatooday. Waxay qaadatay waqti badan iyo dadaal loogu talogalay milkiilayaasha bogagga si ay u soo celiyaan sumcaddooda webka. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd cashar wanaagsan oo loogu talagalay kuwa isku dayaya inay ku xad gudbaan tilmaamaha heerka caadiga ah. Warbixinta Google Panda
Midda labaad ee ay ku leedahay saamiga iyo saameeynta caalamka dijital ah waxay ahayd Google Panda. Waxaa la soo bandhigay Febraayo 2011. Ujeedada ugu muhiimsan ee shaandhayntu waxay ahayd in laga fogaado websaydhyada leh tayada tayada liidata ee ka shaqeynaya natiijada raadinta TOP ee Google. Sidan oo kale, Google wuxuu jeclaan lahaa in uu soo celiyo goobo tayadoodu sarayso oo ku habboon meel u dhow TOP ee SERP oo wanaajiya waayo-aragnimada isticmaale inta lagu jiro baadhitaanka. Cusboonaysiintaan waxaa lagu dhuftay ilaa 12% natiijooyinka raadinta. Website-yada ugu wayn ee internetka oo leh wadada joogtada ah ee gaadiidka ayaa ka lumay 50% oo ka mid ah martidooda sababtoo ah boosaskooda SERP ayaa hoos u dhacaya. Cusboonaysiinta Google-ga waxay waxyeeleysaa oo kaliya bogagga internetka ee leh tayada hoose ee tayada. Meelaha kale, xaaladda lama badin. Google wuxuu caddeeyay in tayada sare iyo maaddooyinka ugu muhiimsan ee la heli doono lagu abaalmarin doono qiimeynta ugu sareeya, halka qoraalka tayada hoose aan la garan karin lagu ciqaabi doono. Panda badanaa waxay diiradda saartay bogagga leh waxyaabo khafiif ah. Farsamadani waxay ahayd hab wanaagsan oo loogu talagalay Google in ay bartilmaamiso beeraha content si sax ah maxaa yeelay waxay noqotay arrin weyn oo ku saabsan natiijooyinka raadinta iyada oo tayada hoose ee tayada aan laheyn ee gaarka ah oo ujirta miisaankeeda. Kuwa xad-dhaafka ah ee sharciyada lagama helin khariidadan Google ilaa taariikhdaas. Maalmahan, Google ayaa kobciya Panda iyada oo qayb ka ah liiska maaddooyinka asaasiga ah. Waxay u adeegtaa qayb ka mid ah casriyeynta tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, biloowgii bishiiba. Natiijadu waxay noqotay, inay adagtahay in la ogaado in goobtu ay la socoto casriga Panda iyo in kale. Google Penguin update
Google Penguin algorithm oo la bilaabay Abriil 2012
. Waa algorithm webspam kaas oo loogu talagalay in lagu ciqaabo kuwa aan raacin xeerarka Google. Marka waxqabadka algorithm lagu dhaqmo, Google ayaa soo saaray bayaankan soo socda:
".algorithm waxay u taagan tahay hagaajin kale oo ku saabsan dadaalkeena lagu yareynayo webspam iyo kor u qaadida maadada tayo sare leh. Inkastoo aanan sheegi karin calaamadaha gaarka ah sababtoo ah ma rabno in aan dadka siino si ay uhesho natiijooyinka raadinta oo aan ka sii darno waayo-aragnimada dadka isticmaala, talo-siinkayaga Webmasters waa inaan diirada saaro abuuritaanka goobo tayo sare leh oo abuuraya khibrad wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan habab cad oo SEO ah (GOOGLE). "
Waxay bartilmaameedsadaa shabakadaha isticmaala nidaamka isku-xirka khayaanada si ay ugu sarreeyaan Google. Kuwa ganacsatada ah iyo kuwa websaydhka ah kuwaas oo helay juice isku xira goobaha ay isticmaalaan farsamooyinka madow ee SEO-ka sida iibsashada xiriirka ama beerashada xidhiidhinta ayaa la mamnuucay. Markii markii la sii daayay Google Penguin, goobo tallaabo qaadday si looga saaro dib-u-tayada aan tayada lahayn ayaa laga yaabaa inay dib u soo kabtaan. Laga soo bilaabo qaybtiisa, Google wuxuu fursad u siinayaa in uu si dhaqso ah ugala xariiro xiriirka xun. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad fulisaa qalabka isku-xirka Google ee khayraadka. Kuwa ku dhuftey ciqaabta Google Penguin waa inay sugaan illaa iyo hadda algorithm mar labaad u orday si ay u helaan jagooyinkooda.
Qodobadani waxay wali saameynayaan darajooyinka boga iyada oo tayada iyo tayada la xidhiidha ay qayb muhiim ah ka yihiin nidaamka liiska Google. Taasi waa sababta ay u kharashgareyn karto sumcadda bogga si aad u hirgeliso farsamada SEO-ka ee shabakada madow ama ay shaqaaleyso koox SEO ah oo aan xirfad lahayn. Xilligan, cusbooneysiinta Penguin ayaa badisay ka dib markii ay ku xadgudbeen xidhiidhada waxayna saameeyeen 3,1% su'aalaha Source .